“संघर्ष नै जीवन हो” ५०० लिएर काठमाण्डौ छिरेका युवा २८ वर्षकै उमेरमा यसरी बने करोडपति ! – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > “संघर्ष नै जीवन हो” ५०० लिएर काठमाण्डौ छिरेका युवा २८ वर्षकै उमेरमा यसरी बने करोडपति !
admin December 10, 2020 जीवनशैली	0
भनिन्छ– ‘संघर्ष नै जीवन हो ।’ रोग, भोक र अभावका बीच नै मानिसले प्रगति गर्ने सिँढी भेटेको हुन्छ । नेपाली समाजमा यद्यपि अहिले पनि जेठो छोराका काँधमा पारिवारिक जिम्मेवारी थमाइदिने प्रचलन छ । यही प्रचलन र बाध्यताको भूमरीलाई चिर्दै २८ वर्षकै कलिलो उमेरमा पर्यटन क्षेत्रमा परिचित नाम बनेको छ, शमशेर पराजुली । पराजुलीको जन्मथलो लमजुङ राइनस नगरपालिका हो । हाल उनी काठमाण्डौको नागार्जुनस्थित रानीबनका बासिन्दा हुन् ।
पराजुली ग्लोबल सफारिस नेपाल प्रालि र ग्लोबल होलिडेजका संस्थापकसमेत हुन् । ग्लोबल सफारिस नेपालमा ५ वटा प्रोफेसनल सिकार अनुज्ञापत्र पाउनेमध्ये एउटा हो । ग्लोबल होलिडेले चाहिँ विदेशी पर्यटकहरुलाई पदयात्रा तथा घुमफिर गराउने गर्दछ । पराजुलीको समेत लगानीमा लाजिम्पाटमा सम्पदा गार्डेन होटलसमेत सञ्चालनमा ल्याएका छन्। पराजुली अहिले पर्यटन व्यवसायी र होटल व्यवसायीका रुपमा सक्रिय छन् भने सेयर बजारमा समेत उनको लगानीको आंशिक हिस्सा रहेको बताउँछन् । पराजुली हाल एमबीएस, एमए र एलएलबी अध्ययनरत छन् ।
२०६४ साल बैशाखमा उच्च शिक्षाका लागि राजधानी छिरेका पराजुलीको हातमा आमा गुनाकुमारी पराजुलीले ५ सय रुपैयाँ थमाइदिएका थिए । पारिवारिक आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण उनी आउनेबित्तिकै ट्रेकिङतिर लागे ।
उनको आफ्नै मामासँग सिकेर २०६४ सालदेखि २०६९ सालसम्म पोर्टर र गाइडका रुपमा काम गरेका पराजुलीले वैदेशिक रोजगारीमा जान ५-६ चोटि प्रयास नगरेका होइनन् तर पर्यटन क्षेत्रमा आइसकेपछि पछि त्यस्तो भावना आफैं मरेर गएको उनले बिजशालालाई सुनाए । ‘हिमालले शेर्पा जन्मायो, शेर्पाले हिमाल जन्मायो तर मेरो घरको बाध्यताले मलाई जातीयताबाहिर गएर काम गर्न बाध्य तुल्यायो’, उनले निकै भावुक हुँदै भने, ‘मैले पोटरको काम गर्दा ६ वर्षसम्म परिवारसँग बसेर दशैं मनाउन पाइनँ । मैले धेरै दुःख गरेँ काम नै प्रमुख प्राथमिकतामा पर्यो, पढाइ चाहिँ दोस्रो ।’
सन् २०१३ मा ग्लोबल सफारिस र ग्लोबल होलिडे दुई कम्पनी स्थापना गरी पर्यटन व्यवसायीका उदाएका पराजुली सेयर बजारमा भने सन् २०१० तिर दोस्रो बजार प्रवेश गरेका रहेछन् ।
पर्यटन क्षेत्रकै व्यवसायी भएकैले उनले सुरुमा तत्कालीन टुरिज्म डेभलपमेन्ट बैंकको ८ सय कित्ता सेयर प्रतिकित्ता रु १५५ हाराहारीमा खरिद गरे । विभिन्न हाइड्रोपावरका प्रमोटर सेयरमा समेत लगानी गरेका पराजुलीले सेयर मार्केट ५–७ जनाको हातमा रहेको आरोप लगाए । कम्पनीको बोर्ड निर्णय आउन २–३ महिनाअघि नै ती माफियाहरुलाई थाहा हुने र सोझासाझा लगानीकर्ता उच्च मूल्यमा फस्ने गरेको उनको बुझाइ छ ।
सन् २०१५ सम्म सेयरमा सक्रियता रहेका पराजुलीे आफ्नो पर्यटन व्यवसायमा असर पर्न थालेपछि हाल निष्क्रियताजस्तै छन् । बाह्र वर्षअघि अध्ययनलाई अघि बढाउनभन्दा रोजगारी गर्नुपर्ने बाध्यतामा पिल्सिएका पराजुलीले काठमाण्डौलाई कर्मथलो बनाएर हाल पार्टटाइम जागिर ३५ जनालाई र फुलटाइम ४५ जनालाई रोजगारीसमेत दिइरहेका छन् । पर्यटन क्षेत्रमा लागेर उनले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अवार्डसमेत हात पारेका छन् ।
समाजसेवामा पनि रुचि रहेका पराजुलीले गरेको संघर्षको प्रतिफल अझै पाउन बाँकी रहेको जिकिर गरे । ‘जीवनमा हात बाँधेर बस्न नपरोस्, पराजुलीले भने, ‘पर्यटनमा छिरेपछि यहीँ केही गर्नुपर्छ र देशको सेवा गर्छु भन्ने भावना पलाइरह्यो ।’टुरिजम सेक्टर ग्ल्यामरस जब रहे पराजुलीको अनुभव छ । ‘सीमारहति लगानी, विभिन्न देशसँग अन्तरक्र्रिया घुमघाम गर्न पाइने भएकाले यो ग्लामरस फिल्ड हो’, पराजुलीले अनुभव सुनाए ।
पराजुलीका बुवालाई कलेजो र फोक्सो रोग लागेर थलिएपछि उपचार गर्दागर्र्दै दुई वर्षसम्म अक्सिजनमा समेत राख्नुपरेको थियो । ‘तर अथक मेहेनतका बाबजुद बुवालाई बचाउन सकिएन’, उनले निराश हुँदै भने।
परिवारप्रति आज्ञाकारी छोरा र पर्यटनमा कटिबद्ध व्यवसायी बनेका पराजुलीले युवाहरुलाई बिदेश नगई यहीँ पौरख गर्न आग्रह गरे । वैदेशिक रोजगारीले परिवारका अन्य सदस्यहरुलाई समेत अल्छी बनाइरहेको जिकिर गर्दै पराजुुलीले भने, ‘यहीका कारण उत्पादनमा समेत गिरावट आइरहेको छ ।’
देशमा चलेको गृहयुद्धले समेत नेपालीहरु बाध्य भएर विदेश जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको पराजुलीको बुझाइ छ । यद्यपि नेपालमा कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा धेरै सम्भावना भएको पराजुली दाबी गर्छन् ।
पर्यटनमा त अझ अथाह सम्भावना भएकाले युवाहरुले नै पर्यटनलाई अघि बढाउन भूमिका खेल्नुपर्ने उनको भनाइ छ । काम गर्दा लडिने तर उठ्ने बानी गर्नुपर्ने थाक्न नहुने पराजुली प्रेरित गर्छन् ।
आफ्नो मामा राजु थापालाई गडफादर मानेका पराजुलीले दिदीबाट समेत धेरै संघर्ष गर्न सिके । सफल बन्न इमान्दारिता, मेहेनत र चातुर्यता आवश्यक रहेको उनको भोगाइ छ ।
आगामी दिनमा स्थापित पर्यटन व्यवसायीका रुपमा चिनिन चाहेका पराजुलीले पर्यटनलाई सरकारले नै नबुझेको आरोप लगाए । इन्डिभिज्युअल कर सिस्टम लागू सरकारले गरेको खण्डमा मेगा कम्पनीहरुले समेत कर तिर्न बाध्य हुने उनको बुझाइ छ ।
पर्यटनमा काम गरिरहेकाहरुलाई पेन्सनको समेत आवश्यकता रहेको पराजुलीले औंल्याए । एयरपोर्ट सुधारदेखि पर्यटन बसपार्कको टड्कारो आवश्यकता रहेको उनले बताए।
एयरपोर्टको सुधार गरेर र पर्यटकलाई तिब्बती मोडलमा लैजाँदै क्वालिटी पर्यटक ल्याउन जरुरी रहेको पराजुलीको भनाइ छ । प्राकृतिक पदयात्रालाई निरन्तरतासँगै नयाँ–नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको सोधखोज अनुसन्धान सरकारले गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले पर्यटकीय रुटको सम्भाव्यताप्रति सरकार चनाखो हुनुपर्ने सुझावसमेत दिए।
बिजशाला मा भक्तराज रसाइलीले लेखिएकाे लेखबाट साभार गरिएको हो।